DAAWO: Wasiir Puntland ah oo lagu eedeeyey Lunsasho lacag Shaqaale & Gadood ka taagan.
August 26, 2019 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa sheegaya in aysan saaka shaqadoodii tagin shaqaalaha wasaaradda Warfaafinta ee Puntland oo ka cabanaya mushaarkoodii oo kasoo baxay gacanta wasaaradda Maaliyada, isla markaasna ay ku tuhmayaan in uu musuqmaasuq wasiirka wasaaraddaas.
Shaqaalaha qaar kamid ah oo la hadlay PUNTLANDTIMES.COM ayaa sheegay in ay ka cabanayaan mushaar la’aan, gaar ahaana Gunadii ay qaadan jireen oo ay sheegeen in wasiirka Warfaafintu uusan bixin bilihii lasoo dhaafay.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Cali Sabarey oo aan la xariirnay ayaa ka jawaabi waayay telfoonkiisa gacanta, waxaana eedaha loo soo jeediyey kamid ah in uu Aflagaadeeyey qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradda Warfaafinta.
“Anagu mushaarkayagu waa wax yar oo kooban, laakiin waxa ku shaqeyno waa gunada Wasaaradda Warfaafinta looga jaro Canshuuraha laga qaado Shirkadaha Isgaarsiinta ee kajira gudaha dalka, lacagtaas oo wasiiraddii hore guno ahaan u siin jireen shaqaalaha, haddase wasiirka ayaa toos u qaatay, markii la weydiiyeyna wuu diiday in uu ka hadlo” Ayuu yiri mid kamid ah Shaqaalaha Wasaaraddu.
Wasiirka warfaafinta Puntland Cali Sabareey oo aan la xariirnay ayaan ka jawaabin eedaha loo soo jeediyey,isagoo aan ka jawaabin telfoonkiisa gacanta, sidaas oo kale Wariyaha Puntlandtimes ee Garoowe ayaa booqday xarunta Wasaaradda, inkasto uusan joogin labo goor oo kala duwan oo uu tagay.
Xariiro aan la sameynay wasaaradda Maaliyada, waxay ku ogaatay Puntlandtimes in ay wasaaradda iyo Bangiga dawladda ka baxeen dhammaan mushaaraadka shaqaalaha dawladdu si rasmi ah, balse aysan ogaan karin waxyaabaha kale.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta ayaa dadaal galinaya sidii xiisadan loo soo afjari lahaa, wuxuuna maanta kulamo la yeeshay qaar kamid ah shaqaalaha oo ay ka wada hadleen sidii xal rasmi ah loo gaari lahaa, balse ilaa hadda ma jirto wax lagu guuleystay.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, wuxuu balan qaaday markii uu xukunka qabtay in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa, sidaas oo kalena waxyaabaha aadka ilaa hadda loogu hayo kalsoonida waxaa kamid ah bixinta mushaaraadka Shaqaalaha oo mudo dheer aan heli jirin.
Shaqaalahan ayaa ka codsaday Madaxweynaha Puntland iyo Hanti Dhawrka guud in baaritaan lagu sameeyey dhacdooyinka arrintan la xariira, waxayna codsadeen baaritaan madax banaan, iyagoo ku eedeeyey Wasiir Cali Sabareey iyo qaar kamid ah xubnaha Wasaaradda Musuqmaasuq iyo kutagri fal awoodeed.
Waxaa qoray: Farah Abdulkadir Geylan
Car ninkaasu yuusan Dhulbahante noqon waa nooc ka mid ah dagaalka oo loo muujinayo in ay yihiin reerkaa Dhulbahante wax iimaanka laga qaaday oo wax deeqa aysan jirin oo kii meel loo dhiibaba uu afka iska marinayo waxa yaala halkaa koley ku tahay mushaharka shaqaalaha masaakiinta ah dagaalku wuu wejiyo badan yahay xabbad la isku dhufto keliya ma aha.
lacagta majeerteenku xado ka hadal.. dhulbahnte ha maagin.
Kaas oo kale ayey wax u dhiibayaan, iyada oo waliba waqti xun lagu jiro ninka wax xadaya, Gacanta halaga gooyo Xaaraamiga.
Ayadoo waxaas dhibaati iyo dhaqaala xumo ahi jiraan, ninka dhac kukacay, waxay ila tahay awal bey qalad aheyd in kaas masuul laga dhigo, wuxuu istaahilaa sida shareecadu qabto, in gacan iyo lug isdhaaf ah laga jaro nacaska.